Nebiyadii Waxay ku Hadleen Eraygii Ilaah | Farriinta Kitaabka
Nebiyadii Waxay ku Hadleen Eraygii Ilaah
Yehowah baa u doortay nebiyada inay gudbiyaan farriimo ku saabsan xukunkiisa, caabudaadda saafiga ah iyo rajada Masiixa
WAQTIGII boqorradii Israaʼiil iyo Yahuudah waxaa jiray niman gaar ah oo ahaa nebiyadii Ilaahay. Nimankan waxay haysteen iimaan iyo geesinimo aan caadi ahayn oo eraygii Ilaahay bay sheegeen. Aan aragno afar qodob oo muhim ah oo ay ka hadleen.
1. Burburkii Yeruusaalem. Xilliyo kahor intaanan Yeruusaalem la baabbiʼin Ishacyaah iyo Yeremyaah iyo nebiyo kale baa bilaabay inay dadka uga digaan burburkeeda iyo baabbaʼeeda. Si cad aan la illoobi karin bay u muujiyeen sababta ay cadhada Ilaahay magaaladaas ugu soo degayso. Dadkii magaaladaas waxay isku sheegeen inay Yehowah dadkiisii ahaayeen. Haddaba dulmi, kharribaad iyo caadooyin diini ah oo khaldan bay tan ku beeneeyeen.—2 Boqorradii 21:10-15; Ishacyaah 3:1-8, 16-26; Yeremyaah 2:1–3:13.
2. Soo celintii caabudaadda saafiga ah. Waxaa la sii qoray in dadka Ilaahay xoroobi doonaan markay 70 sano Baabuloon maxaabiis ku ahaadaan. Dhulkoodii cidlada ahaa markay ku noqdaan dib bay u dhisi doonaan macbudkii Yehowah oo Yeruusaalem ku yaallay. (Yeremyaah 46:27; Caamoos 9:13-15) Kuuros baa Baabuloon qabsan doona oo dadkii Ilaahay u oggolaan doona inay dib ugu noqdaan caabudaadda saafiga ah. Laba boqol oo sano kahor intaynan dhicin Ishacyaah baa sii sheegay magaciisa iyo sida gaarka ah uu u qabsan doono magaaladaas.—Ishacyaah 44:24–45:3.
3. Imanshada Masiixa iyo siday ahayd noloshiisa. Waxaa la sii sheegay inuu Masiixa Beytlaxam ku dhalan doono. (Miikaah 5:2) Oo uu ahaan doono nin isla hooseeya oo qalbi qabow Yeruusaalemna dameer ku soo galo. (Sekaryaah 9:9) Waxaa la yiri inkastuu lahaan doono dabeecad deggan oo naxariis badan dadku way karhi doonaan qaar badanaa way diidi doonaan. (Ishacyaah 42:1-3; 53:1, 3) Si innaba naxariis lahayn baa loo dili doonaa. Laakiin nolosha Masiixa ma sidaas bay ku dhammaatay? Maya. Markuu noloshiisa allabari u bixiyay cafis bay dad badan u suuraggelisay. (Ishacyaah 53:4, 5, 9-12) Haddii la soo sarakiciyo keliya bay tan dhici kartay.
4. Xukunka Masiixa ee dunida. Binuʼadmi dembile ah ma awoodaan inay si nabad leh isu maammulaan. Haddaba Boqorka Masiixa ah waxaa loogu yeeri doono Amiirka Nabadda. (Ishacyaah 9:6, 7; Yeremyaah 10:23) Waqtiga xukunkiisa binuʼaadanka oo dhan nabad baa ka dhexeen doonto xayawaankana nabad bay kula noolaan doonaan. (Ishacyaah 11:3-7) Jirro mar dambe ma jiri doonto. (Ishacyaah 33:24) Xitaa dhimasho weligeed baa la liqi doonaa. (Ishacyaah 25:8) Markuu Masiixa boqor noqdo kuwii dhintay dunida baa lagu soo sarakicin doonaa.—Daanyeel 12:13.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay buugagga Ishacyaah, Yeremyaah, Daanyeel, Caamoos, Miikaah iyo Sekaryaah.
Farriimo sidee ah bay nebiyadii Ilaahay sheegeen?
Maxay nebiyada ka sii sheegeen burburkii Yeruusaalem iyo dib u dhisiddeedii?
Nebiyadii Yehowah maxay ka sheegeen Masiixa iyo noloshiisa?
Nebiyadii xukunka Masiixa ee dunida sidee bay ku tilmaameen?
Wadaag Wadaag Nebiyadii Waxay ku Hadleen Eraygii Ilaah